Haweeney xoghaye u ah farmaajo oo sheegtay in aysan somaali aheyn kuna soo qortay boggeeda facebook “waxaan ahay……” | Xaqiiqonews
Haweeney xoghaye u ah farmaajo oo sheegtay in aysan somaali aheyn kuna soo qortay boggeeda facebook “waxaan ahay……”
Xogheynta gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dood weyn ka dhalisay baraha bulshada ku xiiriirto, kadib markii soo dirtay qoraal fasir badan yeeshay.
Nimca Ciise oo ah xogheynta Farmaajo, horena u ahayd weriye ka tirsan Radio Hargeysa ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda FB ku sheegtay in shaqo kasta oo ay heyso aysan waxba ka bedeli karin inay tahay Somaliland.
“Shaqo kasta oo aan hayo macnaheedu maaha iney i badaleyso. (Waxaan ku faanayaa inaan ahayn reer Somaliland) -… I’m very proud to be a Somalilander..”a ayay qoraalkeeda ku sheegtay xogheynta madaxweyne Farmaajo kooxda Farmaajo uga soo biirtay magaalada Hargeysa.
Qoraalkan ayaa keenay in taageerayaasha Somaliland ay si weyn u bogaadiyaan oo fursad u arkaan inay Nimca aamisan tahay Somaliland. Dad kale ayaa ku dooday in Nimca ay aaminsan tahay kala goynta Soomaaliya, kana soo horjeedo midnimada Soomaaliya, taasoo halis ku ah shaqada ay madaxtooyada ka heyso.
Dad aad u fara badan ayaa eedeeyay Nimca, halka qaar kale ay ku doodeen in ereyga Somalilander aanu muujineyn kala goyn lana mid yahay Puntlander, macnihiisuna yahay degaanka qofku kasoo jeedo.